Ọ bụrụkwanụ na ndị na-ede blọgụ gara Strike? | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 23, 2007 Satọdee, Nọvemba 24, 2007 Douglas Karr
Mgbe m dere ederede dị ka nke a, ọ na-adị m ka m ga-akpasu iwe Google Ike-na-enwe. Ikike m nwere ike 'chọta' bụ isi ihe na ihe ịga nke ọma ya. N'ezie, ihe karịrị ọkara nke ndị ọbịa m na-abịa site na engines ọchụchọ kwa ụbọchị, ihe ka ọtụtụ n'ime nne Google. Ana m arụsi ọrụ ike iji hụ na m dinara kapeeti uhie maka Google site na npako na ọnọdụ niile na-eme ka ha mụmụrụ ọnụ ọchị.
Google etinyela aka na ntanetị ọtụtụ ndị folks maka ugwo nke 'njikọ akwụ ụgwọ' n'ime ọdịnaya ha. Ọbụna ụfọdụdịrị amanye ide na ịkpọsa leta inyefe.
Mana ike gwụrụ m na ya. Ekwela ka m mehie, m ka na-atụ Google egwu egwu ma ana m eji ngwa ha kwa ụbọchị. Ha bụ ụlọ ọrụ na-enweghị atụ ma enwere m obi ụtọ na ọnụnọ ha na-eme ka ndị ọzọ buru ibu na-acha ogologo ọkpa ha. Otu n’ime ihe mere m ji hụ Intanet n’anya bụ na ọ bụ nha anya.
Ego ole ka Google si na Blog a?
Edeela m ihe karịrị 1,000 posts na blog a ma nwee ihe dị ka ndị ọbịa 500 kwa ụbọchị site na Google. Ka anyi kwuo, maka esemokwu, na Google na-eme ihe dika 10 cents otu ugboro na nyocha 10. Yabụ maka nyocha 500 m bịara, e nwere ọchụchọ 50 a na-akwụ ụgwọ njikọ akwụchiri, na-egosi $ 5.00. Iji mara Google, abụ m naanị 1 nke 10 nsonaazụ na ibe, yabụ ka anyị kwuo na m nyere aka ịkọwa cents 50 na akara ụbọchị Google. Ka ọ na-erule ngwụsị afọ, ikekwe enyere m Google aka ị nweta $ 100.
Aghọtara m na nke a bụ nzuzu mgbakọ na mwepụ, mana okwu m bụ nke a… anyị na-ede ọdịnaya nke indexes nke ọma maka Google… yana Google nwere ike ree njikọ PAID dabere na ọdịnaya ahụ. Google n’enweta ego site na OURU anyi ide ederede nke oma na ndeba nke oma, mana enyeghi anyi ikike itinye ihe ahu n’aha ndi ozo. Ihe na-eme ka ndị na-akpọ mgbasa ozi mara mma saịtị m abụghị naanị ọgụgụ, ọ bụkwa ntinye Nchọgharị Search. Google na-ekwuputa na ha nwere okwa anyi, obughi anyi, n’agbanyeghi n’agbanyeghi na anyi bu ndi mere ihe nile siri ike iru ebe ahu!
Companlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ na-egbu Google
Ụlọ ọrụ dị ka PayPerPost ga-akwọ ụgbọala n'okpuru, na ndị ọzọ dị ka Ederede Njikọ Mgbasa ozi amanyewo n’ime ala. Google amalitela agha ma kwadebe nke ọma ibuso ya agha maka anyị niile n'ihi na anyị nwere ike na-emetụta ala ha.
Mana ọ bụ na anyị enyereghị aka ịchụpụ ala ala ahụ? Echere m na anyị mere! 75,000,000 blọgụ na Internetntanetị na-ebugharị TON nke ọdịnaya dị oke egwu n'ọnụ ụzọ Google. Kama anyị ịtụ anya ihe na Google, anyị na-arịọ ma na-ekpekwa ekpere ka ha depụta anyị nke ọma na oge.
Usoro Deimal Deimal
Google ịgwa ndị na - ede blọgụ ihe ha nwere ike ime na nke ha enweghị ike iji blọọgụ ha mee ga - adị ka Dewey Decimal System na - agwa ndị ode akwụkwọ ihe ha nwere ike na ndị ha enweghị ike ide n’akwụkwọ ha.
Google na-agbanye gburugburu ndị na-ede blọgụ ole na ole bụ ndị kwụrụ ụgwọ njikọ bụ usoro ama ama nke ndị ọchịchị aka ike na ndị isi ohu na-ejikarị. Wepu ndi nkpagbu ole na ole n’ime ndi agha wee nye ha ezigbo otiti… onye obula ga-aru oru ma mechie onu.
Dewey to Author, “Onwere onye kwụrụ ụgwọ maka aha gị n'akwụkwọ gị? Ndo Mazi Onye edemede, anyị na-adọpụta gị na ndeksi ahụ. Ọ bụrụ na achọrọ ka ndị ahụ mara, gwa ha ka ha kwụọ anyị ụgwọ, anyị ga-enye ha ebe ha chọrọ. ”
Onye edemede, "Ya mere, olee otu m ga esi enweta ego?"
Dewey, “Nke ọma, ọ bụrụ na ị nọrọ na ndeksi anyị, ị ga - enweta ọtụtụ ndị na - agụ ya.”
Onye edemede, “Chere, nke ahụ agaghị enyere gị aka ijigide ọkwa dị mma nke ga-adọta ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ ma, n'ihi ya, ree karịa ngwaahịa gị."
Dewey chịrị ọchị, “N’ezie! Ma ọ bụrụ na ị geghị anyị ntị, ọ dịghị onye ga-agụ akwụkwọ gị. ”
Anaghị m ekwupụta, na, na Google ụgwọ mu. Naanị m kwenyere na nke a bụ nnukwu ihe atụ ọzọ nke ụlọ ọrụ dị umengwụ na-anwa ichebe isi iyi ego site na ịchụ nta ahụ. Kama ịmepụta ụzọ dị mma iji nyochaa data gbara gburugburu na ịtọ njikọ njikọta na njikọ njikọta, Google na-ewere ụzọ dị mfe.
A bụ ajụjụ, ihe ma ọ bụrụ na anyị gara “Onri”? Gịnị ma ọ bụrụ na ndị 75,000,000 blọọgụ kpebiri ịtụfu a roboti faịlụ na-akwụsị Google si indexing ha… ha niile! Kedu ihe ga - ahapụ Google n'oge ahụ? A ga-ahapụrụ ha mbipụta akụkọ na ebe nrụọrụ weebụ. Na njedebe nke ụbọchị, ndị ahụ anaghị akwụ ụgwọ njikọ? Ebee ka Google ga - anọ ma ọ bụrụ na anyị anọghị?
Amaara m ebe m ga - anọghị na Google, agbanyeghị, yabụ m ga - abụ ezigbo odibo ma soro iwu.
Ekwesighi m ịme iwu, n'agbanyeghị.
Tags: nlekota oru geosocialnchịkọta influencermultidomainnkwusaechiche nyochaSlidermmekorita nke mmadunchịkọta mmadụ mgbasa ozinlekota oru vidiyonyocha nyocha
Nov 24, 2007 na 12:43 AM
nke a na echetara m post m dere n’ụbọchị ọzọ
ọ bụ ha sandbox na ruo mgbe ụfọdụ-onye na a mma sandbox abịa tinyere… ọma maa na anyị nwere na-egwu site google iwu
Nov 24, 2007 na 8:27 AM
Echere m na ọ bụrụ na ị dabere na ọnọdụ ndeksi gị iji chụga okporo ụzọ gị ka ị nwee ike ị nweta ego, ị ga-akacha mma igwu egwuregwu google. Ma ọ bụ ọzọ, dị ka i kwuru, tinye ụfọdụ koodu na-agwa google robots ka ha pụọ.
Mmeghachi omume mbu m bụ naanị… gịnị ga - eme ka ị dee ọdịnaya ka mma ka ndị mmadụ wee nweta gị na ntanetịime nri gị? Enwebeghị mgbe m google ma chọta blọgụ gị mana ahụrụ m ya ka ekwuru na blog elses onye m masịrị m ma tinye ya na onye na - agụ m.
Zọ ọzọ kachasị ọsọ m maara iji mbanye ọdịnaya bụ ide ihe na-adịghị mma banyere ihe. Mgbe m na-enweta 10x nke okporo ụzọ mgbe m bash ihe dị iche na naanị ide ọdịnaya "B".